I-Raw Lorcaserin HCL Powder (846589-98-8) Abavelisi-Phcoker
I-Raw Lorcaserin i-hydrochloride powder yi-serotonin 2C (5-HT2C) i-receptor agonist kunye neyeza ezilawulwa ngomlomo ezikhuthaza ...
I-Raw Lorcaserin i-hydrochloride powder yi-hydrochloride efunyenwe ngokuphendula kwe-lorcaserin powder kunye ne-hydrochloric acid efanayo. Isetyenziswa njengechiza elichasene nokukhuluphala. I-Lorcaserin hydrochloride yi-5HT2c receptor agonist eboniswe ukuba isetyenziswe kubantu abadala abane-BMI -30, okanye abo bane-BMI -27 kwaye ubuncinci imeko enxulumene nobunzima njengoxinzelelo lwegazi, uhlobo lwe-2 yeswekile okanye idyslipidemia. inciphisa uvakalelo lokuhlutha, kwaye kucingelwa ukuba kuthintela ukuvela kwesifo se-valvular yentliziyo enxulunyaniswa nokusebenza kwe-5-HT2B receptors, indawo yengqondo eyaziwa ukuba idlale indima enkulu kulawulo lwendlala kunye nokutya. Ngokusebenzisa ezi receptors, iLorcaserin hydrochloride powder inokunciphisa ukusetyenziswa kokutya ngokunciphisa ukutya kwaye yenze umntu azive egcwele nokuba sele etye ukutya okuncinci kunesiqhelo. yamkelwe namhlanje yi-FDA kwisigqibo esimangalisayo emva kweminyaka emi-2 yokuphononongwa.
I-Lorcaserin hydrochloride powder isebenza ngokulawula ukutya-ngakumbi ngokwenza i-brain receptors ye-serotonin, i-neurotransmitter eyenza iimvakalelo zokuhlutha kunye nokwaneliseka. Ukungeniswa kokutya kulawulwa liziko lokuhlutha, elibekwe kwi-ventromedial nucleus ye-hypothalamus kunye nendawo yokulamba ekhoyo kwi-hypothalamus esecaleni. Amagalelo ahlukeneyo avela kumaziko aphezulu kunye neephecana zesisu ziyahlangana kwi-arcuate nucleus, apho zimbini iintlobo ze-neurons ezilawula ukutya okhoyo. Okokuqala, iqela lokutya elikhuthazayo elivelisa ukutya elivelisa i-agouti protein kunye neuropeptide Y; Okwesibini, ukutya ukutya iqela eline-cocaine kunye ne-amphetamine elawulwayo (CART) kunye ne-pro-opiomelanocortin (POMC) neurons. I-POMC iqulethe ii-receptors ze-5-HT 2C, ezithi xa zenziwe zasebenza zikhuphe i-alpha-melanocyte-evuselelayo yehomoni (alfa-MSH) .Zombini izithintelo kunye nezivuseleli ze-neuron ziqhubela phambili iiprojekthi ze-nucleus yenyani kwi-hypothalamus. I-Paraventricular nucleus iqulethe i-melanocyte 4 receptors (MC4R) ethintela ukutya kwiidosi zonyango i-lorcaserin hydrochloride powder esebenza njenge-5-HT 2C agonist kwi-POMC neurons, ethi yona ibangele ukukhutshwa kwe-alfa MSH. Ukuqhubeka kwe-alfa i-MSH isebenza kwi-MC4R kwi-nucleus yeparadricular kwi-hypothalamus, ekhokelela ekwehliseni umdla wokutya. Kwiidosi ze-supratherapeutic, i-lorcaserin hydrochlorider ikwasebenza kwi-5-HT 2B kunye ne-5-HT 2A receptors.
I-Lorcaserin HCL powder iza kwifom ye-tablet kwaye ithathwa ngamaxesha angama-1-2 ngosuku, kunye okanye ngaphandle kokutya. I-Lorcaserin kufuneka isetyenziswe kunye nokunciphisa ukutya kweekhalori kunye nesicwangciso sokuzivocavoca.
Umthamo ocetyiswayo we-lorcaserin hcl powder yi-10 mg elawulwa ngomlomo kabini ngosuku. I-Lorcaserin inokuthathwa ngaphandle kokutya. I-Lorcaserin hcl kufuneka iyekwe kwizigulana ezingaphumeleliyo ukufezekisa ubuncinci i-5% yokulahleka kwesisindo ngeveki ye-12 kuba abaguli abanakufumana ilahleko enesisindo ngokuqhubeka nokunyanga.
I-Lorcaserin Hcl powder isetyenziselwa unyango lokulawula ubunzima obungapheliyo kubantu abadala abane-index mass mass (BMI) ye-30 okanye ngaphezulu (ukutyeba kakhulu) njengokongeza kwi-calorie yokutya kunye nokuzivocavoca. Ikwavunyiwe ukuba isetyenziswe ngabantu abadala abane-BMI engama-27 okanye ngaphezulu (ukutyeba kakhulu) kwaye abanesimo esinye esimalunga nobunzima esifana noxinzelelo lwegazi (uxinzelelo lwegazi), okanye i-cholesterol ephezulu (i-dyslipidemia). Nangona kunjalo, inokuba neziphumo ebezingalindelekanga. Njengasezantsi: